3IN 1NC Mashiinka Mashiinka Quudinta iyo Soosaarayaasha - Shiinaha 3IN 1NC Servo Quudiyaha Warshadaha
Dabeecad 1. Iswaafajinta jaangooyooyinku waxay qaadataa akhrinta mitirka elektaroonigga ah ee elektiroonigga ah; 2. Feejignaanta saxda ah ee sarreysa waxaa wada laba dhinac oo togan oo taban iyo taban si loo xakameeyo hagaajinta ballaca; 3. Dhererka xariiqda quudinta waxaa lagu hagaajiyaa wiishka mootada lagu wado; 4. Labo ka mid ah aaladda wax lagu xiro ee duuban ayaa loo isticmaalaa xaashida walxaha; 5. Rullaluistemadka Quudinta iyo rullaluistemadka sixitaanka waxay ka samaysan yihiin bir qaali ah oo qaata (daaweyn adag oo daweynta chromium); 6. Qalabka gacanta ku cadaadinaya Haydarooliga; 7. Qalabka mo ...